Inani kunye neSebenzi kwi-Base Ten ye-Kindergarten
IsiGqeba esiqhelekileyo kwi-Kindergarten
Kwi-Kindergarten, le nqobo yebhonkmark ibhekiselele ekusebenzeni ngamanani ukusuka ngo-11 ukuya ku-19 ukufumana isiseko senani lexabiso . Inombolo kunye nokuSebenza kwiSiseko seSiseko seNkulanga yeshumi kubhekisela ekusebenzeni ngamanani ukusuka ngo-11 ukuya ku-19 kwaye kwakhona ukuqala kwexabiso lendawo. Kule minyaka, ubuncinane bendawo bubhekisela ekukwazi ukuqonda ukuba i-1 ayikho nje 1 kunye nenombolo efana ne-12, enye ibonisa i-10 kwaye ithathwa njenge-1 yeshumi, okanye inombolo enjenge-11, enye ibe Ngasekhohlo limela 10 (okanye 10) kunye ne-1 ngakwesokudla ibonisa 1.
Nangona oku kunokuba ngathi kunengcamango elula, kunzima kubafundi abatsha. Njengabantu abadala, sikhohliwe ukuba sifundwe njani isiseko se-10, mhlawumbi ngenxa yokuba safundiswa kakhulu kudala. Kukho iingcamango ezine zezifundo zematriki ezidweliswe ngezantsi ukuze zikuncede ukufundisa le ngcamango.
Isicwangciso sokufundisa 1
Ixabiso leNdawo yokuQala. D. Russell
Iimbophu zePassicle, amacwecwe ephepha kunye namanani ahlukeneyo ukusuka kwi-10 kuya kwe-19 kunye nezibophelelo ze-elastics.
Ba nabantwana babamele amanani kwiiplate zamaphepha ngokubeka amaqela e-popsicle ama-10 kunye kunye ne-strap tile okanye ibhanti e-elastic kwaye ke ubalekele yonke inamba yeenduku ezifunekayo. Buza ukuba yiyiphi inombolo abaye bayimela kwaye babenze ukuba bakubale. Bamele balale iqela eli-1 njenge-10 baze bathelele intonga nganye ye-popsicle phezulu (11, 12, 13 ukuqala ngo-10, akukho enye) kuyo yonke inombolo.
Lo msebenzi udinga ukuphindaphindiwe rhoqo ukwenza ukwakha.
IsiCwangciso sokufundisa 2
Amanqaku kunye namacandelo amaninzi ephepha ngamanani ahlukeneyo phakathi kwe-10 no-19.
Buza abafundi ukuba benze amachaphaza kwiphepha ukumela inani. Buza ngoko ujikeleze i-10 yamachaphaza. Ukuphonononga umsebenzi ogqityiweyo ngokuthi abafundi bathi, 19 liqela le-10 ne-9 ngaphezulu. Bamele bakwazi ukukhomba iqela lalishumi kwaye babale ukusuka kwi-10 kunye namanye amachaphaza (10, 11, 12, 13, 14, 15, ngoko-ke i-group group ten and 5).
Kwakhona, lo msebenzi udinga ukuphindwa kwiiveki eziliqela ukuqinisekisa ukuba ukuqonda kunye nokuqonda kwenzeka.
(Lo msebenzi unokukwenziwa kunye neentsimbi.)
Isicwangciso sokufundisa 3
I-Base Ten Place Mat. D. Russell
Indawo yokubhala iphepha kunye neentsika ezimbini. Kuphezulu kwikholam kufuneka kube ngu-10 (kwicala lasekhohlo) kunye ne-1 (kwicala lasekunene). Amakhonksi okanye iikrayoni kuya kufuneka.
Thetha inombolo phakathi kwe-10 no-19 kwaye ubuze abafundi ukuba bafake iingaphi amashumi efunekayo kwikholamu yeshumi kwaye zingaphi na ezifunekayo kwiikholamu. Phinda nenkqubo ngamanani amaninzi.
Lo msebenzi udinga ukuphindwa kwixesha leveki ukwenza ukwakha nokuqonda.
Phrinta i-Placemat kwi-PDF
IsiCwangciso sokufundisa 4
Iifowuni ezili-10. D. Russell
Iiplanga ze-10 kunye neekrayoni
Ukuchonga inani eliphakathi kwe-11 no-19, cela abafundi babalale umbala we-10 bamba umbala omnye kunye nenombolo efunekayo kumgca olandelayo ukumela inombolo.
Iifowuni ezili-10 zixabiseke kakhulu ukusetyenziswa kunye nabafundi abancinane, zibona ukuba amanani abhaliweyo kwaye ahlaziywe kwaye ahlinzeke ngokubonakalayo okukhulu ukuqonda 10 nokubala ukusuka kwi-10.
Phrinta i-Frame ye-10 kwi-PDF
UThixo noThixokazi Amakhandlela
Igama lomntu uBennett, Injongo Yakhe kunye neNtsapho Yomlando